Jereo ny loharano mafana ao Ourense | Vaovao momba ny dia
Raha mikasa ny iray amin'ireo fialantsasatra misy anao ianao izay tena zava-dehibe dia miala sasatra, dia mety mieritreritra spa na fitsaboana fitsaboana amin'ny toerana toy ny loharano mafana any Ourense. Raha misy zavatra mampiavaka ity faritany ity dia satria izy io dia misy loharano mafana avo lenta sy faritany hafanana samihafa mahasarika mpizahatany an-jatony isan-taona.
Andao hojerentsika izay loharano mafana hafa azonao aleha ao amin'ny Ourense ary inona ny tombony azo avy amin'izany. Ity dia iray amin'ireo fialantsasatra ahafahantsika mankafy tanàna mahafinaritra sy mahafinaritra ary gaga amin'ny loharano mafana sy dobo voajanahary koa eo amoron'ny Ony Miño. Haitra.
1 Loharano mafana ao Ourense
2 Loharano mafana Outariz
3 Loharano mafana an'i A Chavasqueira
4 Dobo mafana toy ny Burgas
5 Hevitra hafa mahaliana
En Ourense any dia toerana malalaka misy loharano mafana maimaim-poana ampiasaina izany, izay eken'ny besinimaro tsara. Ao amin'ireny toerana ireny dia mazàna no misy hidim-baravarana hitahiry zavatra na dia tsy manana fotodrafitrasa hafa toa ny orana aza izy ireo. Na izany aza, mendrika izany ny traikefa ary ny mankafy ny tontolo voajanahary dia zavatra iray mampiavaka azy manokana.
Loharano mafana Outariz
Ny Outariz Hot Springs dia iray amin'ireo malaza indrindra. Manana tetezana mpandeha an-tongotra izy ireo izay manasaraka ny faritra roa amin'ny loharano mafana. Eo an-tampony no misy ireo antso Pozas de Outariz sy ilay eo ambanin'ny Burgas de Canedo. Ny faritra tsirairay dia misy dobo rano mangatsiaka ary dobo mafana telo. Ao amin'ny vala dia misy faritra feno ala, satria amin'ny fahavaratra dia olona maro no manararaotra milentika. Misy ihany koa ny banky sy ny booth izay misy serivisy sasany. Ireo rano ireo dia manana fananana mahasoa ho an'ny rheumatism na arthritis. Ny loharano mafana dia misy telo kilometatra miala ny afovoan-tanànan'i Ourense, tonga amin'ny fiara amin'ny lalana OU-402.
Loharano mafana an'i A Chavasqueira
Ny iray amin'ireo loharano mafana maimaimpoana be mpitsidika indrindra dia A Chavasqueira, miorina amoron'ny renirano Miño, izay manome azy ireo hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa. Ireo no natsangana voalohany tao an-tanàna, hampiasain'ny mponina ao aminy, izay rehefa mafana ny andro, dia tsy maintsy nangatsiaka ihany ireo faritra tao amin'ny renirano ireo. Ireo rano mineraly antonony ireo dia tsara ho an'ny aretin-tratra, rheumatism, asma ary ho an'ny olan'ny hoditra. Ao an-tanàna izy ireo, akaikin'ny tobin'ny mpamono afo. Amin'ny manodidina azy dia misy faritra ahitra ampy handry hilentika rehefa milentika ihany ny andro. Na izany aza, ireo loharano mafana ireo dia azo tsidihina mandritra ny taona, satria 43 waters ny ranony.
Dobo mafana toy ny Burgas
Ny tanànan'i Ourense koa dia misy dobo eo afovoany, toy io dobo mafana io. Toy ny sasany amin'ireo dobo voajanahary ireo dia mivoaka manodidina ny 67 at ny rano, fa ny rano fandroana kosa Amin'ny maripana ambany kokoa izy, tokony ho 37º. Ny rano ao amin'ity pisinina ity dia tsy manana fananana fanasitranana betsaka toy ny an'ny any amin'ny faritra hafa, ka izany no antony ampiasana azy io fotsiny ho toerana fialan-tsasatra. Toerana sarotra ahitantsika io dobo lehibe io, ary koa sauna mando. Toy ny any amin'ny fotodrafitrasa hafa, na dia ety ivelany aza izy ireo, dia manana ora fisokafana sy fikatonana izay tsy maintsy dinihina.
Hevitra hafa mahaliana
Rehefa mitsidika ny loharano mafana ao Ourense ianao dia azo atao koa ny mankafy izay atolotry ny tanànan'ny Ourense, miaraka amin'ny lova mahafinaritra. Iray aminy trano fivavahana lehibe indrindra dia ny katedraly, nanambara ny tsangambaton'ny firenena, fantatra koa amin'ny anarana hoe Basilica of San Martín. Katedraly izay ahitanao ireo endrika maritrano isan-karazany, satria nohavaozina tamin'ny fotoana samy hafa izy io, izay manana ny Romanesque, Baroque, Neoclassical na Renaissance. Any amin'ny faritra andrefana dia misy ny Pórtico del Paraíso, izay mamerina ilay Pórtico de la Gloria fantatra, na dia amin'ny fomba tsotra kokoa aza.
Eo akaikin'ity katedraly ity dia misy ny fiangonan'i Santa Eufemia, nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, miaraka amin'ny facade Baroque mahatalanjona. Iray amin'ireo tranom-pivavahana hitsidika azy koa ny fiangonan'i san francisco, izay miavaka amin'ny jirofo tsara tarehy feno arches.
Toerana iray hafa ahafahana mankafy ny tanàna ny faritra Alameda do Concello, faritra feno ala misy boaty maoderina maoderina. Tena akaiky ny faritra manan-tantara ao an-tanàna izy io ary koa ny tsenan-tsakafo. Efa any amin'ny faritra manan-tantara afaka mandeha any amin'ny Ben'ny tanàna Plaza izahay, iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ny fivoriana. Ao amin'ity kianja ity no misy ny lapan'ny tanàna ary koa ny lapan'ny episkopaly taloha. Ao amin'ity kianja ity dia misy arcade izay ahafahana mahita bara sy trano fisakafoanana ahafahana maka fialantsasatra mendrika mba hanandrana ihany koa ny sakafo Galisiana matsiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Loharano mafana ao Ourense